The atọ na bọket nke Social Media Marketing Okwu | Martech Zone
Kedu izu dị ịtụnanya nke a nọrọ na Social Media Marketing World! M moderated a nnọkọ na ụlọ ọrụ ịde blọgụ na Justin Levy na Waynette tub. Justin na-eduga ụgwọ na Citrix maka atụmatụ mmekọrịta ha na mmekọrịta ha, Waynette na-eduga enyemaka nke mbọ SAS ọdịnaya. Abụọ dị ịtụnanya ndị mmadụ na-agba nnukwu usoro rụọ ọrụ nke ọma ma rụọ ọrụ.
Ebe ọ bụ na m moderated, m nwere na-agbachi nkịtị na-arapara n'ajụjụ na nyochara azum na ma òtù tinye n'ọrụ na-eto eto ha azụmahịa mgbalị. O nwere ike ịbụ nke mbụ m :). Ya mere na Chakwasa ihie bụ na Justin na Waynette… na mgbe ha na-arụ ọrụ na abụọ kpamkpam dị iche iche ụlọ ọrụ, e nwere ndị a ton nke myirịta na atumatu, atụmatụ, Filiks na mmesho ha tinye.
Ihe na-enye ume ọhụrụ bụ na ha emeghị -ada dị ka nkezi ọkà okwu Social Media. Ha ekwughi goofy ihe banyere ede ihe ị hụrụ n'anya, chọta niche gị, naanị mee ya ma ọ bụ ndị ọzọ hippy na usoro iwu unyi na-arụ ọrụ naanị n'ime ibe nke akwụkwọ kacha mma maka mgbasa ozi mmekọrịta na n'uche onye okike ya.
Ka ụlọ ọrụ a na-eto, amalitere m ịhụ ụfọdụ nkewa n'etiti ihe ọmụma, ahụmịhe na nghọta nke ndị isi mgbasa ozi mgbasa ozi. Ekwenyere m na ha dabara na bọket 3:
Ndị nkuzi - ndị na-ekwu okwu na-ekerịta nghọta maka mbọ onwe ha maka mmepe, imezu na ịnwale mkpọsa mgbasa ozi mmekọrịta iji mee ka ụlọ ọrụ ha baa uru ma na-eto eto. Justin na Waynette bụ nnukwu ihe atụ, yana ọtụtụ ndị isi ụlọ ọrụ nọ na oghere.
Ndị Oki - ndị a bụ ụmụ okorobịa ndị mebere usoro azụmaahịa ọhụụ, dee akwụkwọ ma kwuo okwu na echiche ndị anwalebeghị ma ọ bụ obere mgbe. Ha na-akpata nnukwu ego na ire ahia akwukwo, okwu na ufodu ndi na-acho oru. Mgbe ụfọdụ, ha na-agbanwe ma na-enye echiche ọhụrụ banyere nsogbu ndị dị adị - mana oge ndụmọdụ ha na-enye bụ naanị ihe doro anya.
mgbere - ebe ụlọ ọrụ na-erite uru site na ikwu okwu na ịkekọrịta otu ha si emezi nsonaazụ ndị ahịa, ha anaghị anwa imeri ma ọ bụ ree onye otu na-ege ntị site na ịkọwa ozi gburugburu otu ikpo okwu. Nsogbu nke ndị na-ere ahịa bụ na ha niile na-alụ ọgụ maka mmefu ego site na ibe ha ma ha niile kwenyere na ha bụ etiti nke ụwa. O buru na inwere ebe ikpo okwu SEO, SEO bu azịza ya. Y’oburu na inwee ihe ngosiputa Social Media, Social Media bu azịza ya. Ọ bụrụ na ị nwere ikpo okwu email, email bụ azịza ya.
Enwere nguzozi siri ike nke bọket atọ na Social Media Marketing World ma enwere m mmetụta nke ịbụ ihe ùgwù ịbụ onye ọkà okwu etinyegoro ọtụtụ oge. Otú ọ dị, enwere m nkụda mmụọ, na ụfọdụ ihe omume ebe m na-ahụ bọket # 2 na # 3. Amaara m na m na-ele mmadụ anya n'ihu n'ihi na anyị bụ ndị na-eme… mana ka m na-agwa ndị bịara, nzaghachi bụ mgbe niile otu… olee otú m mejuputa atụmatụ ndị a.
Ndị bịara anaghị abịa ogbako na-enweghị ego… ụgbọelu, nkwari akụ, tiketi, nri… nke ahụ bụ ezigbo ego maka ọtụtụ ndị bịara. Ọ dị oke mkpa na ha ga-ahapụ nzukọ ahụ site na ozi ha chọrọ iji kwalite mmemme ha n'ihu. Obi dị m ụtọ na ndị nọ na Social Media Examiner nwere nguzozi dị otú ahụ na egwu ha - ọ bụrụ na ị banye maka a virtual tiketi, ị ga-enweta ozi ị chọrọ! Ọ bụghị niile sessions mere… ma ihe karịrị iji mee ka ọ baa uru!
Achọpụtara m na m na-amafe bọket 2 na 3 ma na-ahazi oge m na-abịa na bọket 1.
Tags: ụlọ ọrụndi orusessionssmmwndị ndu soshal midiamgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozindị na-ekwu okwu mgbasa ozi na-elekọta mmadụNa-ekwumgbere
“Ọ bụrụ n’inwe ebe ikpo okwu SEO, SEO bụ azịza ya. Y’oburu na inwee ngosiputa Social Media, Social Media bu azịza ya. Ọ bụrụ na ị nwere ebe ikpo okwu email, email bụ azịza ya. ” Nke a bụ nnọọ eziokwu. Echere m, onye ọ bụla nke na-eji ụfọdụ ikpo okwu na-eji ya eme ihe (s). Agbanyeghị, agbanyeghị na ebumnuche ndị a nwere ike bụrụ nke ziri ezi ma dabere na ezigbo arụmụka, ha abụghị nke kachasị, nyiwe ndị ọzọ nwekwara ike ịba uru. Ndi mmadu kwesiri ile nsogbu anya site na echiche di iche iche.